ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint
Update Date ဇူလိုင် 3, 2020 .2mins read
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ ဘာတွေစားကြမလဲ တုပ်ကွေး ကိုယ်ခံအား အယ်လ်မွန်စေ့​ ကိုက်လန် တုပ်ကွေးရန် တုပ်ကွေးရာသီ အအေးမိ
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး, ရာသီတုပ်ကွေး ဩဂုတ် 4, 2021 .2mins read
Delta Plus မျိုးစိတ် ကို novel SARS-CoV-2 မျိုးစိတ်လို့ ခေါ်သလို B.1.617.2.1 (သို့မဟုတ်) AY.1 လို့လည်း ခေါ်ကြ ပါတယ်။
COVID-19 Delta မျိုးစိတ် ကို B.1.617.2 လို့ သိကြပါတယ်။ အခြားမျိုးစိတ်တွေထက် ကူးစက်မှုနှုန်း မြန်သလို ပိုမိုပြင်းထန်ပါတယ်။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 18, 2021 .3mins read